Ku iibso Bitcoin Afghanistan si degdeg ah oo Amaan ah | Paxful
Si dhakhso ah Bitcoin ugu iibso Afghanistan
Maanta ku sarifo lacagtaada Afghan Afghani (AFN) lacagta BTC adoo adeegsanaaya Paxful, oo ah suuqa ugu wayn ee Bitcoin caalamka. Si ka duwan qaababkii hore ee sarifka Bitcoin, waxaan kuu suurtagelinay inaad BTC ku iibsato qiimaha ay hadda suuqa ka marayso adoon wax qarash dheeraad ah lagaa jaran.
Difaacida lacagtaadu waa muhiimadeena koobaad waana taas sababta ciwaankaaga ay u difaacayaan nidaamyo amaan oo adag sida nidaamka 2 jeer hubinta amaanka. Anagoo kaashanayna Chainalysis iyo Group-IB, waxaad ku niyad samaataa inaad og tahay in Paxful ay tahay mid kamid ah aaladaha ugu amaanka badan ee lagu iibsado Bitcoin.
Marka, haka daahin inaad ciwaan ka samaysato Paxful. Mid ka dooro tiro badan oo yabaahoyada Bitcoin ah oo biloow ganacsigaaga qiimaha leh ee aan qarashka lagaaga jaranayn adoo adeegsanaaya kumbuyuutarkaaga, laabtooga, iOS, ama aalada Android!
Ma haysano yaboohyada Afghan Afghani oo ku jira Afghanistan waqti xaadirkaan. Hoos waxaad ka helaysaa yaboohyada laga yaabo inaad danaynayso.
Qaababka lacag bixinta ee ugu badan Afghanistan
Xawilaadda Caalamiga ah ee International Wire Transfer (SWIFT)
Paxful waxay kaaga dhigaysaa mid fudud oo ammaan ah in aad gadato aadna haysato lacagaha elektoroonigga ah. Hoos ka hel yabooha ugu wanaagsan kuna iibso lacagaha elektoroonigga ah Xawilaadda Caalamiga ah ee International Wire Transfer (SWIFT) maanta.
Ku iibso Bitcoin Xawilaadda Caalamiga ah ee International Wire Transfer (SWIFT)
Ka caawi dadka kale ee jooga Afghanistan inay helaan Bitcoin kadibna hel faa'iidooyin waawayn oo dhan 60% iib kasta oo aad samayso.Billoow inaad ku iibiso koontada baanka maxaliga ah hadda, arag tusmadeena bilaashka ah.. Paxful ayaa heesha 1000 qof oo iibsata Bitcoin kana socda Afghanistan maalin kasta.
Ma taqaanaa dad badan oo doonaaya inay Bitcoin ku gataan gudaha Afghanistan? Adoo kaashanaaya Dukaankaaga Bitcoin iyo Barnaamijka iskaashatada waxaad helaysaa 2% ganacsi kasta abidkaa adoo la wadaagaaya lifaaqa. Hadda biloow.